Xulka Wiilasha Kubadda Koleyga Muqdisho oo ka qeybgalaya ECAIBCC – SBC
MUQDISHO- Xulka Wiilasha Kubadda Koleyga Caasimadda Muqdisho oo muddooyinkan Tababar ku qaadanayay garoonka 1da Luulyo (Ex-Lugino) ee magaalada Muqdisho ayaa u ambabaxay ka qeybgalka tartanka Inter City oo 19ka April ka furmaya magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Wafdi ka kooban 15 xubnood oo isugu jira madax, ciyaartoy iyo warfidiyeeno ayaa ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Cadde, waxaana wafdigan hogaaminayay Guddoomiye Zone 5 ee GOS Abuukar Hiraabe Bakar.
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga Ibraahim Xuseen Cali [Roombo] ayaa ka hor inta aysan ka ambabixin Muqdisho ciyaartoyda kula dardaarmay inay muujiyeen ciyaar wanaag ay ku dheehan tahay karti iyo asluub.
Guddoomiyaha XSKK Ibraahim Roombo ayaa tibaaxay in XSKK mar walba ku dadaali doonaan sidaa aan fagaarayaasha caalamka looga waayin ciyaaryahanada Kubadda Koleyga Soomaaliya. wuxuuna ugu mahadceliyay mas`uuliyiintii kaalinta ka gaystay inuu najaxo ka qeybgalka tartankan Inter City ee Ciyaartoyda matelaysa Muqdisho iyo Gaalkacyo.
Ma`aha markii ugu horeysay ee tartankan Caasimadaha Bariga iyo Bartamaha Afrika oo ay ka qeybgalaan ciyaaryahano matelaya Caasimadaha Soomaaliya, waxaana hore ugu qeybgeli jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. Iyadoo sidoo kale sanadkan ay ka qeybgalayaan Ciyaaryahano matelaya Gaalkacyo oo ka dhigaysa in Soomaaliya uga qeybgalaan Tartankan ECAIBCC labo Kooxood.